Asi kana waita mabiko, koka varombo nezvirema nemhetamakumbo, namapofu. Uchakomborerwa nokuti havagoni kuzokudzorerawo. Unozodzorerwa pakumuka kwavakarurama.”
 Zvino Jesu akatarisa vadzidzi vake ndokuti, “Makakomborerwa zvenyu imi varombo nokuti umambo hwaMwari ndohwenyu. “Makakomborerwa zvenyu imi mune nzara zvino nokuti muchazogutswa. Makakomborerwa imi munochema zvino nokuti muchazoseka.
Teererai, hama dzangu dzadiwa. Mwari haana kusarudza here varombo panyika kuti vave vapfumi muchitendero uye vagari venhaka youmambo hwaakatsidzira vanomuda.
Varombo munavo nguva dzose wani. Pamunenge madira zvenyu munogona kuvaitira zvakanaka asi ini hamuneni nguva dzose.
Munhu anoita mwoyochena kumurombo, anokweretesa kuna Tenzi, anomuripa zvaanenge aita zvacho.
Munhu ane ruoko rwunopa akakomborerwa nokuti anogoverana chokudya chake navarombo.
Anodzvinyirira murombo zvisina kunaka anoshora musiki wake, asi anoita tsiye nyoro kwaari anoremekedza musiki wake.
Munhu anopa kuvarombo hapana chaanozoshaya asi asingavacheuki anova nejambwa guru.
Munhu anodzivira nzeve kumurombo anochema kwaari, iyewo achazochema pasina anomunzwa.
Ipai, nemi muchapiwa, muchadirirwa pamakumbo mwero wakanaka, wakatsindirwa, wakazunguzirwa, unomupfumvumvu; nokuti chiereso chamunoeresa nacho ndicho chamuchaererwa nacho.”
Munhu anokukumbira, mupe. Usanyime uyo anoda kukukwereta.
Unamati hwakanyatsoti tsvikiti husina kusvibiswa pamberi paMwari naBaba, ndohuhu: kushanyira nherera nechirikadzi munhamo dzadzo uye kuzvibata usingasvibiswi nenyika.
 “Kana mokohwa minda yenyu regai kukohwa kusvikira kumichetocheto, kana kufuhwa muchitora mbesanwa dzinosaririra muminda yenyu pakukohwa. Musabva mafuhwiridza munda wamagirepisi kana kubva manhongerera magirepesi anenge adonhera pasi. Ngazvisiyirwe varombo navatorwa. Ini Tenzi Mwari wenyu ndini ndinodaro.
1 Johani ൩:൧൭
Ngatitii munhu ane upfumi hwapanyika akaona mumwe wake asina chokubata iye womuomesera mwoyo pakadaro rudo rwaMwari runganzi ruri maari sei?
 “Kana pakati penyu pane murombo ari hama yako muIsiraeri muguta renyu ripi zvaro munyika yenyu yamunopiwa naTenzi Mwari wenyu musaomesere mwoyo, kana kutadza kutambanudzira ruoko muchipawo hama yenyu murombo iyeyo. Asi muitire tsiyenyoro ugomupa chikwereti chinokwanirana nechose chaanenge achida chacho.
 “Kana Mwanakomana womunhu wouya nembiri yake pamwechete navatumwa vose, achagara pachigaro chake choumambo chinembiri. Marudzi ose avanhu achaunganidzwa pamberi pake. Iye achaparadzanisa vanhu, mumwe nomumwe, sokuparadzanisa kunoita mufudzi hwai nembudzi. Achaisa hwai kurudyi rwake, mbudzi achidziisa kuruboshwe. “Ipapo Mambo achati kuna vari kurudyi rwake, ‘Uyai imi makakomborerwa naBaba vangu, muwane nhaka youmambo yamakagadzirirwa kubvira pakutangisa kwapasi nokuti ndakanga ndiine nzara mukandipa chokudya. Ndakanga ndiine nyota mukandipa chokunwa. Ndakanga ndiri muenzi mukandigamuchira. Ndakanga ndisina chokupfeka mukandipfekedza. Ndakanga ndichirwara mukandishanyira. Ndaiva mujeri mukauya kwandiri?’ “Vakarurama vachamupindura vachiti, ‘Tenzi ndirini watakakuonai muine nzara tikakupai chokudya kana kuti muine nyota tikakupai chokunwa? Ndirini watakakuonai muri muenzi tikakugamuchirai kana kuti musina chokupfeka tikakupfekedzai? Ndirini watakakuonai muchirwara kana kuti muri mujeri tikakushanyirai?’ “Mambo achavapindura achiti, ‘Zvirokwazvo ndinoti kwamuri pamakaitira izvi kune mumwe wavaduku vehama dzangu idzi, makatoitira ini.’ “Ipapo achati kuna vari kuruboshwe rwake, ‘Ibvai kwandiri imi makarengererwa rushambwa mupinde mumoto usingaperi wakagadzirirwa Dhiabhori navatumwa vake, nokuti ndakanga ndiine nzara mukasandipa chokudya. Ndakanga ndiine nyota mukasandipa chokunwa. Ndaiva mweni mukasandigamuchira. Ndakanga ndisina chokupfeka mukasandipa chokupfeka. Ndairwara uye ndaiva mujeri asi hamuna kundishanyira.’ “Ivo vachapindurawo vachiti, ‘Tenzi ndirini watakakuonai muine nzara kana kuti muine nyota kana muri mweni kana musina chokupfeka kana kuti muchirwara kana kuti muri mujeri tikasakuitirai chinhu.’ Iye achavapindura achiti, ‘Zvechokwadi chaizvo zvamusina kuzviita kuno mumwe wavadiki ava, hamuna kuzviita kwandiri?’ “Ava vachaenda kuchirango chisingaperi asi vakarurama vachienda kuupenyu usingaperi.”
nokuti ndimi diziro ravarombo, botero ravanhu vasina chavanacho, dumba rokuhwanda dutu nomumvuri wokuhwanda zuva nokuti kufemuruka kwemunhu ane utsinye kunenge dutu riri kurovera kurusvingo
Ndakakuratidzai, muna zvose, kuti nokushingaira kudaro munhu anofanira kubatsira vakarukutika, tichiyeuka mazwi aTenzi Jesu zvaakataura achiti, ‘Chikomborero chikuru kupa pane kugamuchira.’ ”
Mururami anoziva zvinokodzera kuitirwa varombo asi akaipa haanzwisisi izvozvo.
Ndinoziva kuti TENZI anomiririra nyaya dzavarombo uye anoitira zvinoruenzaniso vasina chavanacho.
Vaitonga zvichemo zvavarombo nezvavasina chavanacho zvikabva zvavafambira zvakanaka. Zvanzi naTenzi, “Hakusiri iko kundiziva here ikoko?
1 Samueri 2:8
Anosimudzira varombo kubva pamhukutu pavagere, navasina zvavanazvo kubva pazaradota, achindovagarisa navana vokumba huru, vachitowana zvavo nhaka yezvigaro zvapamusorosoro. Mbiru dzenyika ndedzaTenzi padziri ndipo paakamisa nyika.
Akavapindura achivati, “Ane hanzu mbiri ngaagoveranewo naasina, naane zvokudya ngaaitewo zvimwechetezvo.”
“Kana mumwe wako muIsiraeri agere newe akawirwa nourombo, zvokutoshayisisa chokubata, mutore ugare naye umubatsire, sezvaungangoitira mutorwa kana munhu anokumbira pokugara mumusha mako.
 Usapambe murombo nokuti murombo, usambunyikidze vatamburi padare, nokuti Tenzi achavarwira, achatorera upenyu vanovapamba.
“Pakutonga mhosva tonga usingatsaudzire, usinganyari murombo kana kuremekedza mupfumi, asi unofanira kutonga mhosva nomazvo.
 Taura wakamiririra mbeveve umiririre zvinofanira kuitirwa vatamburi. Zarura muromo wako utonge zvakarurama umiririre varombo navashaiwi.”
TENZI anoti, “Zvino ndichasimuka pamusana pavarombo varikupambwa nokugomera kwavatamburi, ndichavapa zvavanosuwira, zvokugara pasina chinovatambudza.”
Mapfupa angu achati, “TENZI ndiani akaita semi? Imi munonunura asina simba kune ane simba kupinda iye uye murombo naasina chaanacho kumupambi.”
Mbavha ngaachirega kuba ichiita basa kwaro namaoko ayo [rinoiraramisa] kuti ibatsire vasina chokubata.
Chiona, iyi ndiyo mhosva yakanga iri yomunun'una wako Sodhomu. Iye navanasikana vake vaizvikudza, vaine zvokudya zvakawandisa nokugarika vari vanhu vari pamutambaratede asi haana kubatsira varombo nevaiva muushai.
 “Ko kutsanya kwandinoda hakusi uku here kwokusunungura majoto ouipi nokukurura zvitirobho zvejoko nokusunungura vanenge vachidzvinyirirwa vagoenda zvavo nokutyorawo joko rose rose zvaro? “Hakusi here kugoverana chokudya chako neane nzara nokupinza mumba mako varombo vanongodzungaira nenyika, ukaona asina chokupfeka uchimupawo chokupfeka usinganzvengi kuyamura hama yako?
Munhu anonyomba murombo anonyomba musiki wake. Munhu anofarira nhamo dzavamwe haamborega kurangwa.
1 Johani 3:17-18
 Ngatitii munhu ane upfumi hwapanyika akaona mumwe wake asina chokubata iye womuomesera mwoyo pakadaro rudo rwaMwari runganzi ruri maari sei? Vanangu ngatiregei kungodana zvapamuromo kana zvokungobatana kumeso asi muzviito nomuchokwadi.
“Mambo achavapindura achiti, ‘Zvirokwazvo ndinoti kwamuri pamakaitira izvi kune mumwe wavaduku vehama dzangu idzi, makatoitira ini.’
 Mupe zvako wakasununguka usinganyunyuti mumwoyo mako pakumupa kwaunoita nokuti Tenzi Mwari wako anozokukomborera pabasa rako rose nezvose zvaunoti ndoita. Varombo havazomboperi munyika, naizvozvo ndinokuudza kuti uve noruoko rwakatambanuka runopa hama yako, murombo naasina chokubata ari munyika yenyu.
Mweya waTenzi Mwari uri pandiri nokuti Tenzi akandizodza kuti ndiparidze shoko rakanaka kuvarombo. Akandituma kuzonyaradza vakasuruvara mwoyo, nokuparidzira vari muutapwa rusununguko, nokusunungurwa kwavari muusungwa
Batsiranai mukutakura mitoro yenyu. Saizvozvo munobva mazadzisa mutemo waKristu.
Usakanganwe kuita zvinhu zvakanaka uye kugoverana navamwe zvaunazvo nokuti zvibayiro zvakadaro zvinofadza Mwari.
Bisawo mugove wako wokubatsira varurami vanenge vasina chokubata. Gamuchiranai mudzimba dzenyu.
 Ruzhinji rwavanhu rwakamubvunza rwuchiti, “Zvino toiteiko?” Akavapindura achivati, “Ane hanzu mbiri ngaagoveranewo naasina, naane zvokudya ngaaitewo zvimwechetezvo.”
“Varombo navasina chavanacho vari kutsvaka mvura, asi hapana vatooma pahuro nenyota, ini Tenzi ndichavapindura, Ini Mwari weIsiraeri handivafuratiri.
“Kana pakati penyu pane murombo ari hama yako muIsiraeri muguta renyu ripi zvaro munyika yenyu yamunopiwa naTenzi Mwari wenyu musaomesere mwoyo, kana kutadza kutambanudzira ruoko muchipawo hama yenyu murombo iyeyo.
Vanhu venyika iyoyi vanotorera vanhu zvinhu nechisimba uye vanopamba. Vanoonesa nhamo varombo navasina chavanacho; vanoitira zvakaipa mueni zvisina ruenzaniso.